Global Aawaj | बालबालिकालाई खोपसँगै आँखा परीक्षण हुने बालबालिकालाई खोपसँगै आँखा परीक्षण हुने
बालबालिकालाई खोपसँगै आँखा परीक्षण हुने
काठमाडौँ। अब पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खोपसँगै आँखाको परीक्षणसमेत हुने भएको छ । पहिलो चरणमा इटहरी नगरपालिकाबाट बालबालिका आँखा परीक्षण कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ ।खोप लगाउने उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आँखा परीक्षण गर्न ‘बालबालिका कार्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम’समेत तय हुने भएको छ । खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जाने बालबालिकाको खोपसँगै आँखा पनि नियमित परीक्षण गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको सहकार्यमा ग्लोबल आई हेल्थ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सो पाठ्यक्रम तयार गर्न लागिएको हो । कार्यक्रममा ग्लोबल आई हेल्थका प्रमुख डा. बेन लिम्बूले खोप लगाउने बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रमको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । उहाँले दुई वर्षभित्र प्रदेश १ भर यो कार्यक्रम पुर्‍याइसक्ने जानकारी पनि दिए । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै तालिम दिएर समुदायमा रहेका बालबालिकाको आँखा प्रारम्भिक परीक्षण गराउने गरी पाठ्यक्रममा राखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले आँखा परीक्षण (स्क्रिनिङ) गरेपछि सम्भावित आँखाको जाँच गराउनुपर्ने भएमा अभिभावकलाई विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ पठाउन सल्लाह दिनेछन् । नेपाल सरकारले बालबालिका स्कुल भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा जाँच गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, रेटिनोपेथी अफ प्रिमेच्युरेटी र कुपोषणले गर्दा आँखामा हुने समस्या धेरै छन् । त्यसैगरी दृष्टिदोष र अल्छी आँखा न्यून दृष्टिको मुख्य कारक रहेको छ । आँखारोग विशेषज्ञ प्राडा ओमकृष्ण मल्लले बालबालिकामा रहेको आँखाको समस्या सानै उमेरमा हल गर्न नसकेपछि त्यसलाई उपचार गर्न कठिन हुने बताए।
अप्थोमोलोजी सोसाइटीका अध्यक्ष डा. रोहित सैँजूले बच्चाको उमेरसँगै न्यून दृष्टि वा दृष्टिविहीन हुन सक्ने भएकाले सरकारको सहयोगमा हुने यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्राडा चेतराज पन्तले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सफल भएको क्षेत्र आँखा स्वास्थ्य मात्र रहेको बताए। उनले आँखा क्षेत्रमा नेपाल विश्वमै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताए।